Awooda Dhirta Awooda Solar ee Awooda Si Loo Kordhiyo 5 Megavata | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirAwoodda Dhirta Awooda Solar ee Awooda Cad ayaa Kici doonta 5 Megavata
10 / 12 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Awoodda warshadda tamarta qorraxda ayaa ku kordheysa megawatts
In gaadiidka magaalooyinka dadweynaha by bandhigid 20 baska korontada ESHOT dhig a horeysay ee Turkey, qayb muhiim ah oo tamar laga Energy Solar ah Plant (GES) waxay bixisaa.
1,38 Megawatt (MW) oo ah nooca saqafka GES ee dhismaha xarunta ESHOT ee Buca-Geediz wuxuu u badnaan doonaa 5 Megavata iyadoo GES laga dhisi doono Çiğli iyo xarumo Adatepe ah.
Agaasimayaasha Agaasimayaasha Tamarta iyo Iskaashatada Ganacsatada (ENSIA) ayaa booqday Erhan Bey, oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee ESHOT bishii Sebtember, xafiiskiisana u rajeeyay guul.
Tababare ku xigeenka General ESHOT of Masiirka Sertpoyraz ka hadlayay booqasho sidoo kale dhici Ensier Guddoomiyaha Huseyin Patriots, Izmir degmada Metropolitan ee sannado badan, ku xigeenka Xoghayaha Guud oo soo noqday Bey, injineero ururka ugu muhiimsan ee guusha dhan dhaqaale uu tusaale lagu Turkey in waxaa xusuusiyay.
Isagoo xusay in Tunç Soyer, Duqa Magaalada Caasimadda, uu Erhan Bey u magacaabay madaxa hay'ad si wanaagsan loo aasaasay sida ESHOT, waa tusaale wanaagsan oo muhiimadda uu siinayo mudnaanta. Waxaan si buuxda u siineynaa maalgashiga GES. Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysanno mashruucyada tamarta ee la cusbooneysiin karo ee ESHOT anaga oo aan sugin wax jawaab ah karşılık.
XIIQOOYINKA 2 CARRUURTU WAA LAGU SAMEEYA
Erhan Bey, Maareeyaha Guud ee ESHOT, ayaa sheegay inay ku faraxsanaan doonaan inay si wada jir ah ula shaqeeyaan ururada aan dowliga ahayn ee mashaariicda wax ku soo kordhin doona magaalada. 2020, Mr. wuxuu ku wargaliyay inay ku dari doonaan boqol basaska ESHOT, oo ay kujiraan koronto 20, wuxuuna cadeeyay inay garowsan doonaan maalgashi badan oo deegaanka u roon.
Mr. Erhan wuxuu xasuusiyay in mashruuca hadda socda ee 'GES' ee GES ee Gediz uu soo saaray 2,2 milyan oo kilowatt-saacadood oo koronto sanadle ah oo uu badbaadiyey 1,6 milyan TL.
Waxaan u adeegnaa degmada 536 ee Izmir kun oo basaska 30 ah. Xarumaha Cigli iyo Buca Adatepe waxay sii wadayaan inay dhisaan laba GES oo kaladuwan. Isku darka dhirtaas korantada, oo midkastaaba leh awood rakiban oo ah 1 MW, waxaan abuuri doonnaa ku dhawaad ​​3 milyan oo kilowatt-saacadood oo koronto ah. Hadafkeennu waa inaan sare u qaadno awoodda aan u leenahay 5 MW. Markaan dhammeyno maalgashiyadan oo dhan, waxaan heleynaa 62% wadarta guud ee isticmaalka qorraxda qorraxda. ”
Nidaamka Sare ee Sare ee Suuqa Cusboonaysiinta Dib-u-habaynta Moobe
Channel si ay ula kiciyaan Isticmaala South Korea Model Model
Awoodda sariirta ee xarunta dhexe ee Erciyes waxaa loo labalaabinayaa 10
Warshadaha Tamarta iyo Ururka Ganacsatada
Dhirta Awooda Solar ee ESHOT